‘नेपाल–भारत सम्बन्ध यथास्थितिमा रहँदैन’
अर्थ र बजार
शनिवार, कार्तिक ६, २०७८ ०७:३९:०८
बाढी पहिरोबाट मृत्यु भएका परिवारका सदस्यलाइ कर्णाली सरकारले २ लाख दिने
वेमौशे वर्षाले मुहान बगाएपछि हुम्लाको अदानचुलीमा समस्या
पूर्वन्यायाधीश फोरमले भन्यो, 'प्रधानन्यायाधीश जबराले निकास दिनुपर्ने'
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत सम्बन्धि प्रस्ताब प्रदेशसभामा पेश
मुख्यमन्त्री आचार्यले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव पेश आज हुने
एमालेको महाधिवेशन चितवनमा हुने
हवाई जहाज सञ्चालन नभएपछि आधा फुटवल खेलाडी सिमकोटमै रोकिए
लिमिमा अलपत्र विदेशी पर्यटकको हेलिकप्टरद्धारा उद्वार
नाम्खाको तुम्लिङमा फसेका १२ पर्यटकको हेलिकप्टोरद्धारा उद्धार हुँदै
शनिवार, भदौ १६, २०७५ नेपालबोट समाचारदाता
काठमाडौँ — डा. भेषबहादुर थापा अर्थशास्त्री हुँदै कूटनीतिमा ख्याति कमाएका व्यक्ति हुन् । नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को नेपाली पक्षको संयोजक रहेर काम सम्पन्न गर्दै साझा प्रतिवेदन तयार गर्न उनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे ।
नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीलाई संयुक्त रुपमा ईपीजी प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेका थापासँग ईपीजी, नेपाल–भारत सम्बन्ध, नेपालको पछिल्लो कूटनीतिक/राजनीतिक अवस्थालगायतबारे चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको कुराकानी :
तपाईंहरूले ईपीजीको साझा प्रतिवेदन तयार गर्नुभएको छ । दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन लागिएको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ ?
पहिलो कुरा त नेपाल र भारत सम्बन्धलाई आगामी दिनमा कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयको एउटा लिखित आधार तयार भएको छ । प्रतिवेदनलाई दुवै सरकारले बेवास्ता गरेर पछि हट्न सक्ने अवस्था अब छैन । सबभन्दा बढी चर्चा र विवादमा रहँदै आएको विषय हो, नेपाल–भारतको सम्बन्ध । सन् १९५० को सन्धि सुरुदेखि नै विवादित छ । कुनै न कुनै पक्षले अभिव्यक्ति दिएर सन्धि असमान भयो भन्दै आएका छन् । भारत स्वतन्त्र भएको केहीमै गरिएको त्यो सन्धिमा खारेज वा परिमार्जनका पक्षमा आवाज उठ्दै आएको छ । त्यसैले हामीले निकै अध्ययन र मेहनत गरेर यसको साझा बाटो पहिचान गरेका छौं । हामी स्वतन्त्र व्यक्ति भएकाले निकै खुला भएर प्रतिवेदन तयार गरेका छौं । प्रतिवेदन हामी आठै जना भएर दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँछौं । यो निकै छिटो हुन्छ । समय मिलाउँदै छौं । प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेर प्रतिवेदनबारे बाहिर बोल्छौं ।
साझा प्रतिवेदनका लागि भारतीय पक्ष एकाएक कसरी सहमत भयो ? पहिले त उनीहरू खासै सकारात्मक देखिएका थिएनन् नि ?
ईपीजीको पहिलो बैठकमै हामीले आठै सदस्य एकझैं भएर काम गर्ने र दुवै पक्षलाई साझा प्रतिवेदन बुझाउने सहमति गरेअनुरूप नै काम अघि बढेको थियो । आठै जनाको एउटै उद्धेश्य हो– सम्बन्धको सुधार र सकारात्मक दृष्टिकोण राखेर त्यसमा अघि बढ्ने । सार्वभौमिक हिसाबबाट समानस्तर नभएको विषयमा छलफल गर्ने सहमति गरेर काम अघि बढेको थियो । नेपालको राजनीतिक नेतृत्व, बौद्धिक समुदायदेखि सबै निकायसँग अन्तरक्रिया गरेर राष्ट्रिय सहमतिको आधार तयार गरिएको थियो ।
पटकपटक कुरा उठेर पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको विषय पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले नै यहाँसम्म आइपुगेको भन्न मिल्छ ?
नेपाल र भारतबीच १९५० को सन्धिलाई यो तहमा ल्याउने आधार खडा गरेको मुख्य श्रेय पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय मनमोहन अधिकारीलाई जान्छ । बीचबीचमा संवाद नभएको होइन । संवैधानिक राजतन्त्र हुन् वा सक्रिय राजतन्त्र, सबै समयमा परिमार्जन गर्नुपर्ने भनेर छलफल भएको हो । सबै राजनीतिक दल सत्तामा आउँदा पनि यो विषयले प्रश्रय पाएकै थियो । तर, अधिकारीले एक तह माथि उठेर सम्बन्धको नयाँ खाका प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यसपछि हरेक भेटघाटमा त्यो विषयले थप निरन्तरता पाएको हो ।
अझ भनौं, त्यसपछि नेताहरू पछाडि हट्न सकेनन् । कतै न कतै संयुक्त वक्तव्यमा राजनीतिक खपतकै लागि भए पनि त्यो विषय राखे । त्यही शृंखलामा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि त्यो कार्यले मूर्तरूप लिने अवस्था आयो । उहाँले सरकारी संयन्त्रबाहिर गएर समूह बनाउने र छलफल गर्ने विषय उठाउनुभयो । त्यही विषयलाई सुशील कोइरालाले आफ्ना पालामा अघि बढाउनुभयो ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली २ वर्षअघि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा यो विषयले आकार लिएर हामीले काम थालेका हौं । नेपाल र भारतका दुवै पक्षसँग सम्बन्ध कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा निकै लामो बहसपछि यो स्थितिमा हामी पुगेका हौं । पुराना तथ्य खोज्नेदेखि भएका सम्झौता केलाउने र कतिपय सम्झौताका जिउँदो साक्षी/अनुभवीसँग भेटेर छलफल गर्ने कामसमेत गर्‍यौं । यो प्रक्रिया नै यति लामो थियो कि उनीहरूले पनि कतिपय विषयमा सहकार्य गर्नैपर्ने थियो । भारतमा यो विषय मनमोहनसिंह प्रधानमन्त्री हुँदै महसुस गरिएको थियो । त्यसपछिका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि यसबाट पछि हट्न सक्ने अवस्था रहेन । राजनीतिक तहमै कतिपय विषय छलफलमा रहेकाले समयावधिदेखि कार्यादेश तोकेर काम अघि बढेको हो ।
यो प्रतिवेदनबाट दुवै सरकार पछि हट्न सक्दैनन् र यसको कार्यान्वयनको विकल्प पनि छैन भन्ने यहाँको आशय हो ?
यो साझा प्रतिवेदन बनेर हामी एक चरण माथि आइसकेका छौं । सरकारी संयन्त्रभन्दा छुट्टै संयन्त्र बनेर काम अघि बढ्यो र हामीले त्यो काम आफ्नो समयसीमामा अडिएर फत्ते गर्‍यौं । यो नेपाल एक्लै वा भारत एक्लैले होइन, दुवै पक्ष एक भएर गरेकाले परिवर्तित अवस्थामा समयसापेक्ष सम्बन्धसहितको सुझाव तयार भएको छ । सम्बन्धमा गुनासो २००७ सालदेखि हुँदै आएको भए पनि अग्रसर भएर काम अघि बढेको थिएन । आलटाल नहोस् भनेरै २ वर्षे कार्यादेश राखिएको हो । २ वर्षअघि यो विषय आरम्भ हुँदै त्यसका अन्य विषयलाई बलियो बनाउने काम भएको थियो ।
तर, यसको कार्यान्वयन राजनीतिक तहभन्दा पहिले कर्मचारीतन्त्रमा छलफल हुने हुनाले त्यो निकायसँग विश्वस्त हुने आधार छ ?
सधैं गुनासो गर्ने तर प्रक्रिया अघि नबढाउने प्रवृत्ति छ । दुई देशको सन्धिलाई खारेज गर्न सकिने प्रावधान भए पनि यसलाई परिवर्तनको आधारमै अडेर अघि बढाइएको छैन । कुनै प्रक्रियाको सुरुवात गर्ने तर काम अघि नबढाउने गरिन्थ्यो । पहिले पनि खाका बुझाएर त्यसको जिम्मा विदेश सचिवलाई दिइएको थियो । तर अघि बढेन । अब त्यस्तो अवस्था आउँछ जस्तो लाग्दैन । राजनीतिक र कर्मचारी तहमा पनि यसमा सुधार गर्नुपर्ने महसुस भएको पाएको छु ।
अहिले समयसापेक्ष बनाउने र सम्बन्धलाई सुधारेर भविष्यमा यसलाई निरन्तरता दिनेमै अडेर हामीले साझा प्रतिवेदन तयार पारेका छौं । अब यो प्रतिवेदनलाई राजनीतिक तह हुँदै कर्मचारीको तह पार गरेर संसद्मा छलफल भई अन्तिम निष्कर्षमा पुग्ने सन्धिको प्रक्रियामा प्रवेश गराउनु हो । हामीले कुनै मतभेद नगरी साझा प्रतिवेदन तयार पारेका छौं । यो बिन्दुमा पुग्नु भनेको सफलताको पहिलो चरणको सुरुवात हो ।
त्यसो भए अहिले नेतृत्वमा विश्वास धेरै गर्नुभएको छ ?
सहमतिको बिन्दुमा दुवै तहमा छलफल गरेका छौं । यो प्रक्रियाको सुरुवात भएको छ । यसलाई दुवै तहको नेतृत्वले स्मरण गर्ने विश्वास हाम्रो छ । कुन बिन्दुमा के भयो भन्ने विषयमा भन्दा पनि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएपछि हामीले सार्वजनिक गर्ने हुनाले मूलभूत उद्देश्यलाई अवलम्बन गरेर कमीकमजोरी हटाएर नयाँ आयाम सुरुवात गर्ने प्रक्रिया थालनी भएको छ ।
प्रतिवेदनका लागि भएका प्रक्रिया सबै रेकर्डमा रहन्छन् कि सामान्य केही पन्ने सुझाव मात्र हो ?
हामीले गरेका सबै गतिविधि रेकर्डमा छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, विज्ञहरू, सञ्चारकर्मी सबैसँग गरेका छलफल रेकर्ड गरिएका छन् । ती सबैका आधारमा प्रतिवेदन बनेको छ । त्यो रेकर्ड परराष्ट्र मन्त्रालय वा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमा रहनेछ । ती सबै तथ्य ऐतिहासिक दस्ताबेजका रूपमा रहनेछन् । हामी दुवै प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि उहाँहरूले दिने अभिव्यक्तिसमेत त्यसमा उल्लेख गरेर छाड्छौं । उहाँहरूले दिएको निर्देशनका आधारमा प्रशासकीय र कानुनी प्रावधानको काम अघि बढ्ने आशा छ ।
सम्बन्धको आधार अब परिवर्तन हुनेमा यहाँ ढुक्क हुनुहुन्छ ?
अब पछि हट्न सक्ने अवस्था छैन । यो दस्ताबेजलाई भुलेर पछि फर्कने परिस्थिति बन्छ जस्तो लाग्दैन । म यति भन्न सक्छु नेपाल–भारत सम्बन्धका आधार यथास्थितिमा अब रहँदैनन् । कति टाढा पुग्छ भन्ने विषयमा अहिले नै अड्कल गर्न गाह्रो छ । किनकि त्यो राजनीतिक नेतृत्वले लिने निर्णयले तय गर्छ ।
ईपीजीमा मधेसको प्रतिनिधि नभएको र त्यहाँको वास्तविकताको प्रस्तुतिमा टोली चुकेको हुन सक्ने आशंका केही नेताले गर्दै आएका छन । प्रतिवेदनले उहाँहरूको चित्त कसरी बुझाएको छ ?
ईपीजी सरकारले बनाएको भन्ने हामीले भुल्न हुँदैन । यद्यपि, हामीले सबैसँग (हिमाल, पहाड र तराई) सबै पक्षको नेतृत्व र फिल्डमै उपस्थित भएर सरसल्लाह गरेका थियौं । आफ्नो अवधारणा उहाँहरूमाझ राखेका थियौं । सीमा जोडिएका जिल्लाका नागरिकका विषयमा हामीले कुनै कमजोरी छाडेका छैनाैं । यो ७० वर्षको अवधिमा सीमा, विमान अपहरण, अन्य मुलुकले नेपालबाट फाइदा उठाए भन्नेलगायत विषयमा भने हामीले त्यस्ता गतिविधिलाई ठाउँ नदिने भन्दै त्यसका लागि अन्य कुनै संयन्त्र बनाउने गरी सुझाएका छौं ।
भारतीय विमान अपहरणपछि हामी उड्दा फोटो भएको परिचयपत्र आवश्यक छ । तर सीमामा त्यो आवश्यक थिएन जसले गर्दा भारतले बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स राखेको छ । हामीले त्यो रूपमा राखेका छैनौं । सीमामा परिचयपत्र आवश्यक पर्ने विषय सरकारले प्रशासनिक तवरबाट टुंगो लगाउनेछ । सहज आवतजावतमा अवरोध नहोस् भन्नेमा हामीले बढी नै ध्यान दिएका छौं । यसमा दुई देश सरसल्लाह गरेर अघि बढ्न सक्छन् । हामीले सबैसँग संवाद गरेर काम गरेका छौं । गुनासो त भइहाल्छ । प्रतिवेदन बाहिर आएपछि कुन प्रकारबाट सम्बोधन भएको छ, त्यो स्पष्ट हुनेछ ।
नागरिकलाई समान सुविधा र असमान भनिएका केही बुँदा परिवर्तन भएका होलान् नि ?
देखिएका समस्याको निराकरण होस् भनेर यो काम गरेका हौं । सबैको समान धारणा आएको छ । नेपाली पक्षले मात्र होइन, भारतीय पक्षका संयोजक भगतसिंह कोसियारी आफैंले पनि भन्नुभएको छ, सम्बन्ध सुधारले नै हामीलाई यहाँसम्म ल्याएको हो । दुई सार्वभौमिक राष्ट्रहरूबीच औपचारिक विषयमा सामीप्य देखिएर नै कुनै पनि विषय खारेज गरेर भन्दा परिमार्जन गरेर अघि बढ्ने कुरा महत्त्वपूर्ण मानिएको हो ।
कूटनीतिमा कतिपय विषय परीक्षण गरिन्छ । यसैले होला परीक्षण शैलीमा भारतीय सञ्चार माध्यममा आएका विषय अलि फरक छन् नि ?
मैले पनि पढेँ, भारतीय सञ्चार माध्यममा आएको धारणा । तर कुनै व्यक्तिले पुरानै ठीक भन्ने आशयमा केही लेख्छ भन्दैमा यो प्रतिवेदन कार्यावन्यन हुँदैन भन्ने छैन । नेपाल–भारत सम्बन्धका सन्धि परिमार्जन होइन, खारेज नै गर्नुपर्छ भन्ने धारणा पनि आएकै छ । परम्परागत सोच छ । पाएको सुविधा किन परिवर्तन गर्ने भन्ने धारणा पनि छ । म भारतमा राजदूत हुँदादेखि विभिन्न राय प्रकट भएका थिए ।
भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयीले भन्नुभएको थियो, ‘सन्धिमा परिमार्जन बिस्तारै गर्दै लैजानुपर्छ ।’ त्यस्तै धारणा थियो अर्का भारतीय पूर्वप्रधानमन्त्री आईके गुजरालको, ‘छिमेकसँगको सम्बन्ध सुधार नभए भारत अघि बढ्न सक्दैन । छिमेकलाई साथ नलिई हामी अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन ।’ यो सोचाइ भारतीय पक्षमा नभएको पनि होइन । नेपालमा पनि अर्को धारणा छ । सन्धि खारेज गर्ने आँट गर्न नेपाली पक्षले सकेन भन्ने पनि छ । नेपाल र भारतबीच घोचपेच चलेकै हुन्छ । हामीले देखाएको बाटोमा नेपाल भारत सम्बन्ध लैजानसके समस्या देखिँदैन । भारतले पनि अहिले छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधार गर्ने विषय नउठाएको होइन ।
भारतीय पक्षले हाम्रो दायित्व सकियो, प्रतिवेदन तयार भयो भन्न थालेका छन् । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
विगतको विवाद र अस्वाभाविकताबाट यसको कार्यान्वयन हुँदैन भने कसको के लाग्यो र ? तर कार्यान्वयनका लागि आधार तयार छ । आधारको खोजीमा हामी यहाँसम्म आएका छौं । विगतका गतिविधिबाट हामी धेरै टाढासम्म पुगेका छौं । सीमा, डुबान, जनसम्पर्क, सुरक्षा, व्यापार, पारवहन, रोटीबेटी सबै विषय सम्बोधन भएका छन् । नेपाल र भारतका सबै विषयमा सम्बोधन भएको छ । सन्धिले छोएको वा दुई देशको व्यवहारमा देखिएको संकेतमा नयाँ मोड दिने विषयमा सम्बोधन नभएको कुनै विषय नै छैन । प्रतिवेदनबाट सरकार पछि हट्न सक्ने स्थान नै छाडेका छैनांै । अब दुवै सरकारलाई यसले बाँधेको छ ।
कूटनीतिक सम्बन्धमा नेपाल यतिबेला बढी छिमेक केन्द्रित मात्र भएको विषय पनि उठेको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो हाम्रो अस्थिर राजनीतिले निम्त्याएको समस्या हो । राष्ट्रले अपनाउने विषयमा राष्ट्रिय सहमतिमा पुग्न सक्नुपर्छ । हामै्र नेपालमा द्वन्द्व भएको समयमा भारतको तर्फबाट कम्युनिस्ट नेता सीताराम एचुरी आएर भारतीय धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । जबकि त्यो बेला भारतमा कंग्रेसको सरकार थियो । यसबाट बुझ्न र सिक्न आवश्यक छ । सबै दलको एकै धरणा नभएसम्म यस्ता कुरा उठ्छ ।
अहिलेसम्म छिमेकीप्रति बढी ध्यान दिएका कारण अस्थिर वातावरणले हो । यहाँ कुनै पनि नीतिले निरन्तरता पाउन सकेन । अर्को पाटो भनेको नीति अपनाउँदाखेरि हुनुपर्ने सर्वसहमतिको प्रक्रिया संसद्ले अपनाउन सकेको छैन । छिमेकलाई प्रशय दिनुपर्छ । तर त्यसका आधारमा अन्यसँग सम्बन्धको धरातल तय गर्न हुँ‘दैन । नेपालले जुन भूमिका बाङडुङ सम्मेलनपछि अँगालेको थियो, त्यो अहिले अलमलिएको छ ।
भारत, चीन र पश्चिमाको प्रतिस्पर्धा यहाँ बढ्दो छ भनिन्छ नि ?
अस्थिरतताले निम्त्याएको विसंगतिमा निकै ध्यान जान आवश्यक छ । हामी आफंै परिमार्जन हुन आवश्यक छ । भारत, चीन वा अरूलाई दोष दिने होइन । हामीले
के गरिरहेका छौं, त्यो स्मरण गर्न आवश्यक छ । अरूलाई हेर्ने कि आफूलाई राम्रो बनाउने, त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ । २००७ सालमा त्रिभुवनले भारतबाट प्रशासक मगाउनुपरेको थियो, पछि महेन्द्रले हटाए । त्यो भनेको समयअनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्दै अघि बढ्ने हो । आन्तरिक विषयलाई आफ्नो फाइदाका लागि बाह्यकरण गर्ने र बाह्यको उपस्थित भएपछि हस्तक्षेप भन्ने राम्रो होइन । पहिले कानुनको पालना हुन आवश्यक छ । राजनीति सङ्लिएमा त्यसले सुधारको बाटोमा लैजाला भन्ने आशा छ ।
चीनसँगको सम्बन्धलाई अझै पनि नेपालले विकल्पका रूपमा राखेको हो ?
चीनसँग विकल्प होइन । चीन या भारत होइन । दुवै (भारत र चीन) ले हाम्रा लागि होइन, विश्वका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । त्यो हामीले ध्यान दिन जरुरी छ । विश्वमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन चीनले जुन कार्य गरिरहेको छ, त्यो प्रभाव छिमेकमा पर्छ । यसमा हाम्रो अध्ययन पुगेको देखिँदैन । भारतबारे पनि हामीले ध्यान दिन आवश्यक छ । विदेश नीति सञ्चालनमा विश्व परिवेशलाई ध्यान राख्न सक्नुपर्छ । त्यो समाजको पनि जिम्मेवारी हो ।
समाजले उठाउने विषयमा प्रशासनको पनि ध्यान जान आवश्यक छ । प्रशासकीय संयन्त्र ज्यादै कमजोर बनाइएको छ । झिक्ने, राख्ने गरेर थिलथिलो पारिएको छ । अध्ययन गर्ने परिपाटी बन्दझंै छ । राजनीतिको क्रीडास्थल भएको छ । राष्ट्रको विहङ्गम दृष्टिकोण राखेर अघि बढ्न आवश्यक छ । व्यक्ति होइन, विधिको शासनमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
अहिले कूटनीति खस्केको छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
राजनीतिबाट कूटनीतिक क्षेत्र पनि अछुतो नभएकाले यसमा पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले राजनीतिक स्थिरता उन्मुख छ । अहिले स्थापित भएको संसद्को आयु लामो छ । यसमा अब छिमेकबाट पर गएर हामी जुन भूमिकामा थियौं, त्यसमा फर्कन आवश्यक छ । त्यसमा चुनौती बाँकी छ । हल्ला गर्नेभन्दा पनि कूटनीतिमा चुपचाप काम गर्नुपर्छ । सबै स्थानमा मिलिभगतबाट आफ्ना मान्छे राखेर चाहेको जस्तो नतिजा पाउन सकिँदैन । अहिले हाम्रो कूटनीति सञ्चालनमा त्यही भएको देखिन्छ ।
यहाँले अहिलेका राजदूतहरू कमजोर भन्न खोज्नुभएको हो ?
मिलिभगतमा नियुक्ति भएर गएको अवस्था छ । कसरी राम्रो नतिजा दिन सक्छन् ? एउटा क्षेत्रको व्यक्तिलाई अर्कै क्षेत्रमा लगिन्छ अनि कसरी हुन्छ ? जुन क्षेत्रमा नियुक्त गर्ने हो, त्यो व्यक्ति त्यसमा दक्खल राख्ने हुनुपर्छ । दक्षता भनेको चतुर्‍याइँ मात्र होइन, प्रक्रिया पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कसरी व्यवहार गर्ने ? संवाद गर्ने ? प्रस्तुत कसरी हुने ? जस्ता विषय ध्यान दिन जरुरी छ । म नै आर्थिक क्षेत्रको मानिस कूटनीतिमा जाँदा धेरै ध्यान दिएको थिएँ ।
कतिपय मुलुकमा हामीले पठाउने राजदूत अकूटनीतिकभन्दा खेल्ने र खेलाउन सक्ने प्रकारको हुनुपर्छ । एकेडेमी बनाउन छलफल गर्ने हुनुपर्छ । प्रक्रियाबाट ल्याएको नतिजा राम्रो छैन । हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अब्बल बनाउने र कूटनीतिक एकेडेमी बनाएर त्यसमा प्रशिक्षण दिँदै विज्ञ तयार गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । छरपस्ट जानकारीले अब्बल कूटनीतिज्ञ भइँदैन । यो अन्य मुलुकबाट सिक्नुपर्छ । राजदूतबाट नतिजा खोज्ने मात्र होइन, छनोट गर्दा नै ध्यान दिन आवश्यक छ ।
https://www.kantipurdaily.com/Interview/2018/07/08/153101441382235571.html बाट साभार
प्रकाशित मिति: शनिवार, भदौ १६, २०७५, १२:०९:००
मैले यस कारण ओली रोजे – ‘बादल’
'पार्टी एकीकरणको निम्ति प्रचण्डले भूमिका खेल्नुपर्ने हो'- उपाध्यक्ष गौतम (संवाद)
नेपाली अर्थतन्त्रलाई गति दिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका ६ योजना छन (अन्तर्वार्ता)
'पार्टीको निर्देशन भन्दा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार काम गरेका छौं' मुख्यमन्त्री शाही (अन्तर्वार्ता)
‘बानी व्यवहार सुधारौं, दुरी कायम गरौं नत्र फेरि लकडाउनको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ’ – जोस भ्याण्डेलर
बिहिवार, श्रावण २२, २०७७ नेपालबोट समाचारदाता
उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेल भन्नु हुन्छ, 'सरकारले आदेश जारी गरेर मात्रै संक्रमणलाई रोक्न सकिँदैन'
शुक्रवार, श्रावण ९, २०७७ नेपालबोट समाचारदाता
बाढी पहिरोबाट मृत्यु भएका परिवारका सदस्यलाइ कर्णाली सरकारले २ लाख दिने शुक्रवार, कार्तिक ५, २०७८ 28
संकटमा राजनीतिक दल नेपालबोट समाचारदाता
ओली-नेपाल सहकार्य चौध तत्थ्य नेपालबोट समाचारदाता
सिमाजस्तो विषयलाई क्षणिक लाभका लागि राजनीकिरण नगरौ नेपालबोट समाचारदाता
मैले यस कारण ओली रोजे – ‘बादल’ सोमवार, भदौ ७, २०७८
'पार्टी एकीकरणको निम्ति प्रचण्डले भूमिका खेल्नुपर्ने हो'- उपाध्यक्ष गौतम (संवाद) बुधवार, फाल्गुन १२, २०७७
नेपाली अर्थतन्त्रलाई गति दिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका ६ योजना छन (अन्तर्वार्ता) शनिवार, कार्तिक १५, २०७७
घटस्थापनादेखि चलचित्र हल खुल्ने मगलवार, आश्विन १२, २०७८
ठकुरी वस्तिमा गौरा पर्वको रौनक बुधवार, भदौ ३०, २०७८
१५ महिनापछि सिनेमा हल खोल्ने तयारी, तर सञ्चालक अन्यौलमा आइतवार, भदौ २०, २०७८
तरबार हानाहानमा हराएर पत्नीसँग डिभोर्स गर्न पाउनुपर्ने माग
दाइको बच्चाकी आमा बनेकी बहिनीको खुलासाः दाइले दैनिक बलात्कार गर्थे
सांसदले पादेपछि संसद बैठक नै स्थगित
घाट लगिएकी महिला ज्युँदै : पानीमा आधा शरीर डुबाउँदा चल्मलाएपछि अस्पताल भर्ना
SAN Multi Media & Research Center Pvt. Ltd
Simkot 5, Humla Nepal
Kathmandu 16, Balaju Nepal
Phone: +977-9851124610, 9858321107, 9848318092 & 9847522878
सूचना विभाग दर्ता नं: १००४ - ०७५ - ०७६
©SAN Multi Media & Research Center - 2021 All rights reserved.